तपाईँ को हो ? आफैलाई चिन्नुहोस् — Motivatenews.Com
तपाईँ को हो ? आफैलाई चिन्नुहोस्
काठमाडौं – सर्वप्रथम म तपाईलाई तपाईकै बारेमा बताऊँ । पहिलो कुरा तपाईँ असल मानिस हो । तपाईँ निष्पाप हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के होे भने तपाईँ जीवनमा राम्रो काम गर्न चाहानुहुन्छ । नराम्रा या गलत काम गर्न तपाई कदाचित चाहानु हुन्न । तर, दुर्भाग्यवश कहिलेकाहीँ तपाईँले ढाँट्नुपर्छ त कहिले आफ्नो फइदाको लागि केहि तलमाथि पनि गनुपर्दछ ।
तपाईलाई कस्तो लाग्छ भने यो संसार यस्तै छ, अलिअलि नढाँटी, अलिअलि झुटोको सहारा नलिई यहाँ चल्नै सक्दैन । तर त्यस बेला तपाईँको मन खुसी नै हुँदैन किनकि तपाईँ भित्री रुपमा अर्के हुनुहुन्छ । असल मानिस । तपाई वास्तवमै राम्रो मानिस बनेर संसारमा चिन्नुहुन्छ । तपाईँ आफ्नो परिवारलार्इृ खुसी र सुखी राख्न चाहानुहुन्छ । तपाई आफ्ना छिमेकी, साथीभाई र आफन्तहरुप्रति पनि विनम्र रहन चाहनुहुन्छ ।
वास्तावमै तपाईको हृदय निष्पाप र असल छ । तपाई धेरै सफलता, सुखी, उल्लास र उमंगले भरिएको उत्कृट जिन्दगीको हकहार हुनुहुन्छ । राम्रो सम्बन्ध, स्वास्थ्य जीवन अर्थपूर्ण काम र आर्थिक स्वतन्त्रता तपाइको जन्मसिद्द अधिकार हो ।
यी कुरा तपाईँको जिन्दगीमा आउनुपर्छ र आउँछन् । किनकि तपाई योग्य मानिस हुनुहुन्छ ।
२०७७ साउन ३२ गते प्रकाशित